The 2022 MacBook Air ayaa sidoo kale ku dari doonta naqshad leh sumcad | Waxaan ka imid mac
Waana in dhowr saacadood ka hor aan wadaagnay daabacaad taas oo loo malaynayo MacBook Pros wuxuu ku dari doonaa darajada muranka badan, waxaa jira war kale oo aan si toos ah uga aragno sidoo kale Websaydhka MacRumors taas oo ay ka hadlaan MacBook Air ah 2022 oo leh darajada sare ee shaashadda.
Wararka xanta ah ee ku saabsan kooxaha sanadka soo socda laguma qasi karo waxa laga yaabo inaan maanta ku aragno dhacdada Apple.. Sababtaas awgeed, waa in la dhahaa sannadkan ma aaminsani inay jiri doonaan isbeddel xagga naqshadda Mac ka baxsan hagaajinta shaashadda oo aan ku aragnay MacBook Pro oo dhowr bilood ka hor lagu soo bandhigay M1. Gudaha kuwaan waxaa lagu hagaajin doonaa soo -saareyaasha cusub laakiin isbeddelada bilicsanaanta dibedda iyo heerkan suurtagalka ah waa inuu sugaa ilaa 2022.
Jirro kuma laha bandhigga MacBookga sannadka dambe
Waxaa suurtogal ah in Apple ay awood u yeelan doonto inay tirtirto shaashadaha shaashadaha kombiyuutarradeeda ugu badnaan sannadka soo socda, laakiin waxaan u maleyneynaa inay fiicnaan lahayd in aan la dhigin darajada shaashadda oo loo sameeyo naqshad toosan moodooyinka hadda jira. Qaab yar oo khafiif ah laakiin ku jira shaashadda oo dhan ayaa loogu talagalay isticmaaleyaal badan oo ka fiican in qalabka looga tago xirmooyin yar laakiin leh dusha sare udub dhexaad u ah helitaanka kamaradaha iyo dareemayaasha kale.
Noqo sida ay noqon karto isla shaandhaynta Ty98, oo ka hadlaya MacBook Pro wuxuu sharxayaa in jiilka xiga 'MacBook Air‌' ay ku dari doonaan heerkan sare. Waxa kale oo uu sheegayaa in kooxda cusubi ay yeelan doonto naqshad aad u ballaadhan iyo muuqaal aad uga khafiifsan kan Mac-kan uu hadda yahay. Waan arki doonaa waxa ku dhacaya wararkaan xanta ah laakiin waa goor hore in la gaaro gabagabada ugu dambeysa.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Kombiyuutarada Mac » MacBook Air » 2022 MacBook Air ayaa sidoo kale ku dari doonta naqshad heer sare ah
Dukaanka internetka ee Apple hadda wuu xiran yahay si uu u helo isbeddelada ka dib dhacdada aan la shaacin